Chechina beta yewatchOS 7.4 uye tvOS 14.5 yevagadziri ikozvino yakagadzirira kurodha | Ndinobva mac
Apple nhasi yatanga zvakare iyo yechina beta yeWOSOS 7.4 uye tvOS 14.5 yevagadziri. Saka isu tinogona kutotora izvo chero bedzi tine akakodzera profiles akaiswa. Mune ino kesi, iyo yekuvandudza profile iyo inotibvumidza kurodha pasi software nyowani kubva kune izvo zvido zvesystem. Kana iwe uri mugadziri, usatambise nguva nekuti iyi yechina beta inofambira mberi kuti ikwanise kuchinjisa izvo zvinoshandiswa kunzira nyowani dzekushandisa.
Apple yakaburitsa vhezheni itsva yeanoshanda masisitimu eApple Watch uye Apple TV. Isu tatova neyechina beta yeaya maviri mashandiro anowanikwa Kana iwe uri mugadziri iwe unofanirwa kuenda chete kune zvido zvesystem kuitira kuti iyo yekuvandudza isina kunge yangoerekana yasvetuka Ramba uchifunga kuti kunyangwe ivo vachiwanzo kugadzikana, zvinogara zviri nani kuisa izvo zvitsva mukati midziyo yechipiri. Zvirinani kuchengeteka pane kusuruvara gare gare.
watchOS 7.4 inounza nyowani "Kuvhura neApple Watch" ficha iyo inobvumidza iyo iPhone ine Chiso ID kuti ishandise yakavhurwa uye yakasimbiswa Apple Watch seyechipiri yekusimbisa chiyero kana uchipfeka mask kana chero chinhu chinofukidza chikamu chechiso. Ndinofanira kutaura kuti inoshanda kwete nguva dzose, saka Ngatitarisirei kuti vamenya iyi sarudzo.
Kana iri vhezheni itsva yeTVOS, tinofanirwa kuongorora kuti ndeye dYakagadzirirwa yechina uye yechishanu chizvarwa Apple TV. Iyi tvOS 14.5 yekuvandudza beta inogona kutorwa kune Apple TV kuburikidza purogiramu yakaiswa neXcode. OIyo inopa rutsigiro rweazvino PlayStation 5 DualSense uye Xbox Series X controllers, ayo anogona kushandiswa kutamba mitambo kubva kuTVOS App Store uye Apple Arcade.
Kuchiri kunyanyokurumidza kuziva kana maficha matsva akaunzwa mushanduro dzese Apple wachi uye iyo Appe TV. Kana iwe ukawana chero isu tinoda kuverengera iwo mune zvakataurwa. Kana tikaziva kana kuwana chero, isu tinokuzivisa iwe ipapo ipapo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » Chechina beta chewatchOS 7.4 uye tvOS 14.5 yevagadziri ikozvino yakagadzirira kurodha pasi